Wararka Maanta: Khamiis, Aug 16, 2018-Madaxweyne Farmaajo oo magacaabay taliyayaal ciidan iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada
Khamiis, August, 16, 2018 (HOL)- Madax-weynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabay taliyayaal ciidan iyo waliba Agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa xilkii ka qaaday taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Jen CabdiWali Xusseen Gorad, waxaanan xilkan loo magacaabay Daahir Aadan Cilmi.
Fahad Yaasiin oo horay u ahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada ayaa hadda noqonaya ku-xigeenka taliyaha hay’adda sirdoonka Qaranka, halka agaasimaha guud ee madaxtooyada loo magacaabay Dr. Aamina Siciid Cali
Hoose ka akhriso magacyada xubnaha la magacaabay iyo kuwa xilalka qaaday :
Dr. Aamina Siciid Cali waxaa loo magacaabay Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada.
S/Gaas Daahir Aadan Cilmi ayaa loo magacaabay in uu noqdo Taliyaha ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
G/Dhexe Odawaa Yuusuf Raage oo loo dallac-siiyay S/Guuto ayaa isla markaasna loo magacaabay Abbaanduulaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 15/08/2018a waxaa uu Madaxweynuhu u magacaabay Fahad Yaasiin inuu noqdo ku Xigeenka Agaasimaha Guud ee Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka.
G/Sare Xasan Nuur Col-ujoog ayaa loo magacaabay Taliyaha Ciidamada Badda.